Kanada: nanao fanambarana roa ny minisitry ny kolontsaina sy ny fifandraisana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Kanada: nanao fanambarana roa ny minisitry ny kolontsaina sy ny fifandraisana
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao farany Brezila • Kolontsaina • fanabeazana • Vaovaom-panjakana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Minisitry ny kolontsaina sy ny serasera Nathalie Roy androany dia nitsidika ny Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) hanao fanambarana roa manandanja
Fankalazana ny vatan'olombelona marobe
Pablo Picasso, Portrait of Dora Maar, 1937. Solika amin'ny canvas, 55.3 x 46.3 cm ary Famakiana, 1932. Solika amin'ny lamba canvas, 130 x 97.5 cm. Musée national Picasso-Paris Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau © Picasso Estate - SOCAN // Pablo Picasso, The Acrobat, 1930. Ny menaka amin'ny canvas, 162 x 130 cm. Musée national Picasso Paris Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Adrien Didierjean © Picasso Estate - SOCAN (CNW Group / Musée national des beaux-arts du Québec)
Gérard-Morisset Pavilion. Sary: MNBAQ, Idra Labrie (CNW Group / Musée national des beaux-arts du Québec)
Manoloana ny minisitry ny kolontsaina sy ny serasera Nathalie Roy, ny Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) dia nanana ny tombony nanambara ny fampisehoana fampirantiana sanganasan'i Pablo Picasso (1881–1973), mpanakanto fanta-daza eran-tany, izay sanganasany mankalaza amin'ny fomba fakan-tahaka ny hakanton'ireo olona mitokona. Natolotra nandritra ny fifandraisan'ny Kanadiana manokana tamin'ny volana Jona ka hatramin'ny Septambra 2021, Picasso à Québec dia hisy sary hosodoko sy sary tsy mbola natolotra tao Québec, iray amin'ireo mpanakanto manan-danja indrindra amin'ny taonjato faha-20.
"Ny iray amin'ireo laharam-pahamehan'ny governemanta Québec dia ny fahazoana mampiasa ireo sangan'asa Quebecers toy ny sangan'asan'i Picasso, mpanakanto manam-pahaizana malaza eran-tany, ary amin'izany nampiakatra ny lazan'ny Capitale-Nationale sy ny MNBAQ," Minisitry ny kolontsaina sy ny serasera Nathalie Roy nanamarika.
Picasso dia misy ifandraisany bebe kokoa noho ny hatramin'izay
Namboarin'ny Musée national Picasso-Paris (Frantsa) mifototra amin'ny fanangonana mahatalanjona azy, miaraka amin'ny MNBAQ, ity fampirantiana vaovao ity dia hamory sanganasa miisa 77, ao anatin'izany ny sary hosodoko lehibe 45 novokarina teo anelanelan'ny 1895 sy 1972. Ny MNBAQ dia mifantoka amin'ny lafiny lehibe iray nanoloran'i Picasso ny tenany nandritra ny asany. , ny fanehoana marobe ny vatan'olombelona, ​​ary ny fampirantiana dia ahafahan'ny mpitsidika mankasitraka ary, ambonin'izany rehetra izany, dia tonga saina kokoa amin'ny hatsarana tsy mahazatra.
Ny fampirantiana dia hisongadina amin'ny 2021 ao Québec ary haneho ny MNBAQ mandritra ny fahavaratra. A $ 1 tapitrisa- fandraisana anjara avy amin'ny Ministère de la Culture et des Communications no ahafahana manao izany.
“Ity fampirantiana ity dia ahafahan'ny MNBAQ mametraka azy ho toy ny mpanombatombana ny fiovana ara-tsosialy ary ho an'ny fahasalamana amin'ny fankalazana ny fahasamihafan'ny vatana. Amin'ny alàlan'ity fandraisana anjara lehibe ity, ny MNBAQ dia tsy hanatrika fampiratiana fotsiny ireo sangan'asa manan-danja amin'ny tantaran'ny zavakanto eran'izao tontolo izao, fa hampiroborobo ny fanekena ny fahasamihafan'ny vatana amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana fifanakalozan-kevitra miovaova, matanjaka ary ara-potoana momba ny endrika tsara. ”, Hoy ny fanamarihana tamin-kafanam-po Jean-Luc Murray, Tale jeneralin'ny MNBAQ. “Misaotra betsaka amin'ny Ministère de la Culture et des Communications aho noho ny fanohanany tsy an-kanavaka. Quebecers maro no afaka mankafy fampirantiana vaovao lehibe iraisam-pirenena ao Capitale-Nationale amin'ny alàlan'ity fanomezana manokana ho an'ny tranombakoka ity, "hoy izy nanampy.
Fikarohana tsy manam-petra ny vatana
Ny fampirantiana, natao ho toy ny fitsidihana lohahevitra, dia mifantoka amin'ny fampisehoana ny vatana amin'ny asan'i Picasso. Ny vatana dia iray amin'ireo lohahevitra tian'ilay mpanakanto, prisma mahomby izay ahafahany mahazo ireo metamorphose marobe amin'ny asany. Avy amin'ny sary mankany amin'ny fanehoana an-tsary hafa, manomboka amin'ny klasika rehefa nandalina zava-kanto i Picasso, mandra-pahatongan'ny fametahana izay marika mampiavaka azy, ny vatana no ifantohan'ny vinavina sy taratra izay miaraka akaiky sy mahafinaritra. Eo am-pelatanan'i Picasso, ny vatana dia mamboarina, aorina indray ary miova tsy tapaka, ary mivadika ho endrika plastika izay samy manambara ny ampahan'ny tantaran'ity jeneraly tsy manam-paharoa ity sy ny tantaran'ny maoderina zavakanto.
Ny fampirantiana dia miankina amin'ny lohahevitra fito, sary, Anatomie an'ny cubist sy post-cubist, ny majika amin'ny vatana, eny amoron-dranomasina, fihenjanana mahery vaika, biby goavam-be, Nudes ary fierena, ary tena hanakona ny sary hosodoko sy sary kanton'i Picasso, manomboka amin'ny taona niforonan'ny tompony espaniola ka hatramin'ireo sary farany tamin'ny vanim-potoana farany. Izy io koa dia hahitana karazana sary sokitra miavaka izay manaitra ny refin'ny multidisipliner ny asan'ity mpikaroka maharitra ity. Anisan'izany ireo asa Lehilahy manana gitara (1911), Ny Acrobat (1930), Sary eo amoron'ny ranomasina (1931), Jacqueline miaraka amin'ny tànana miampita (1954) ary Sakafo atoandro eo amin'ny ahitra, aorian'ny Manet (1960), sary hosodoko fatratra izay maneho ny vanim-potoana miavaka amin'ny asan'ny artista.
Ny firenena Musée Picasso-Paris amin'ny teny fohy
Ny Musée national Picasso-Paris, notokanana tamin'ny 1985, dia manangona ny tahiry betsaka indrindra manerantany amin'ny sanganasan'ny artista ary manarona ny vanim-potoana rehetra niasany. Noforonina avy amin'ny fanomezana Picasso nafindra ho an'ny governemanta frantsay ireo mpandova ny artista taorian'ny nahafatesany, dia ao amin'ny Hôtel Salé any amin'ny distrika faha-3 an'ny Paris. Ny fanangonana manokana an'i Picasso, izay novoriny nandritra ny androm-piainany, misy ny sanganasan'ny namany (Braque, Matisse, Miró, Derain) ary ireo tompony izay nankafiziny (Cézanne, Le Douanier Rousseau, Degas), dia natolotra ho an'ny governemanta ihany koa tamin'ny 1978 ary nanampy tamin'ny fanangonana tranombakoka Picasso. Tamin'ny 1990, efa-taona taorian'ny fahafatesan'i Jacqueline Roque, Vadin'i Picasso, ny tranom-bakoka dia nahazo fanomezana vaovao nameno ny fanangonana voalohany. Tamin'ny 1992, nomena ny governemanta ny arisivain'i Picasso. Ahitana antontan-taratasy sy sary an'arivony mandrakotra ny androm-piainan'i Picasso ny arisiva. Izy ireo dia manao ny tranombakoka Picasso ho ivon-toerana voalohany natokana ho an'ny fandalinana ny fiainana sy ny asan'ny artista.
Mba hahazoana fampahalalana fanampiny: www.lavadriko.fr
Ny Musée national Picasso-Paris, niara-niasa tamin'ny MNBAQ, dia namolavola ny fampiratiana Picasso à Québec, izay natao tamin'ny alàlan'ny fandraisana anjaran'ny Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des expositions internationales majeures.
Pierre Lassonde Pavilion an'ny MNBAQ
Nanomboka ny volana jona ka hatramin'ny Septambra 2021
$ 2.5 tapitrisa fanarenana ny Gérard Morisset Pavilion
Amin'ny lohataona 2021, ny Gérard Morisset Pavilion ao amin'ny Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) dia hanatrika fiovana amin'ny alàlan'ny $ 2.5 tapitrisa- fampiasam-bola eo ambanin'ny drafitra Fotodrafitrasa Québec an'ny Ministère de la Culture et des Communications (MCC).
"Ny governemanta Québec dia mandray fepetra lehibe ho an'ny Capitale-Nationale izay manan-danja ihany koa amin'ny lovantsika amin'ny alàlan'ny fiantohana ny fitehirizana ny hakanton'ilay tranobe tany amin'ny tranombakoka MNBAQ, notokanana tamin'ny 1933. Ny Gérard Morisset Pavilion dia hitohy tsy mijery ny peratry ny Lemaky i Abraham ary fananana ireharehan'ny Quebecers, ”hoy ny minisitry ny kolontsaina sy ny serasera Nathalie Roy hoy ny maraina teo tao amin'ny MNBAQ.
Tetikasa telo taona
Lafond Côté Architectes dia nanolotra drafitra fanelanelanana mandritra ny telo taona ao amin'ny tatitry ny manam-pahaizana tamin'ny taona 2014. Nanoro hevitra ireo mpanao maritrano ny fanatontosana ny asa amin'ny dingana telo, manomboka amin'ny fivoaran-tsetroka sy ireo vazade mifanila aminy, singa iray laharam-pahamehana. Hanomboka amin'ny asa masonry be ny Aprily 2021 ary natokana ho vita amin'ny 2023.
Ny tetikasa dia misy:
ny famerenana amin'ny laoniny tanteraka ny vavonin-tsetroka sy ny vatofantsika vatofantsika;
ny fanamboarana ny overhangs, ny llam-baravarana sy ny anoloana ny tsanganana ary ny pilasters;
ny fanamboarana na fanoloana windowsills;
ny fanoloana sy fanamboarana singa vy maro toy ny parapets sy flashing.
Azo idirana mandritra ny asa ny pavily
“Ny fitehirizana dia ivon'ny iraka ataontsika ao amin'ny MNBAQ. Mitahiry zavakanto miisa 40 000 amin'ny famoriam-pirenena, saingy anjaranay koa ny miantoka ny fitehirizana ny lova namboarina, izany hoe ireo trano heva efatra mandrafitra ny tranom-bakoka ao Québec City. Tiako ny misaotra ny MCC tamin'ny nanaovany ny zavatra rehetra hahazoana antoka fa mitazona ny lovan'i Quebecers izahay, ”hoy i Jean – Luc Murray, Tale Jeneralin'ny MNBAQ. “Faly izahay manambara fa, na eo aza ny asa, ny Gérard Morisset Pavilion dia ho azon'ny mpitsidika, izay afaka manararaotra ny 350 taona fanazarana zavakanto tao Québec fampirantiana nalaina avy tamin'ny fanangonana nataonay, izay misy efitrano fampirantiana dimy amin'ny fito amin'ny tranobe manan-tantara, fa koa ny lafiny rehetra amin'ny fandaharana ho avy, "hoy izy namarana.